टी-२० विश्वकपको फाइनल आज, कसले मार्ला बाजी ? – Sajha Bisaunee
टी-२० विश्वकपको फाइनल आज, कसले मार्ला बाजी ?
एजेन्सी: वेस्टइन्डिज र इङ्ल्यान्ड आज कोलकाताको ईडन गार्डेन स्टेडियममा आफ्नो दोस्रो विश्व टी-२० उचाल्नका लागि उत्रँदैछन् ।
दुबै टीमले यो उपाधि एक-एक पटक उचालिसकेका छन् । खेलअघिको प्रेस भेटघाटमा दुबै टीमका कप्तानले विश्कप जित्ने बताएका छन् ।
यो प्रतियोगिताको शुरु हुँदा यी दुई टीम फाइनलमा पुग्ने कुरा कसैले पनि कल्पना गरेका थिएनन् । इङ्ल्यान्ड गत वर्ष भएको विश्वकपको पहिलो चरणबाटै बाहिरिएको पीडामा मल्हम लाउन यो टी-२० विश्वकपमा उत्रेको थियो । उता वेस्टइन्डिजका खेलाडीहरु आफ्नै क्रिकेट बोर्डसँग जुधिरहेका थिए ।
प्रतियोगितामा पहिलो पटक दुबै टीम सुपर-१० को समूह-१ बाट १६ मार्चमा आमनेसामाने भएका थिए । जहाँ इङल्यान्डले दिएको १८२ रनको लक्ष्य पछ्याएको वेस्टइन्डिज क्रिस गेलले नटआउट रहँदै शतक जोडेपछि छ विकेटले विजयी भएको थियो ।
यस खेलपछि उपाधि जित्ने आफ्नो लक्ष्यबाट करिब बाहिर भएको इङ्ल्यान्डले जो रूटको विस्फोटक ब्याटिङमा दक्षिण अफ्रिकालाई पराजित गरेको थियो ।
आफ्नो उत्कृष्ट खेलबाट टी-२० विश्वकपमा आएको अफगानिस्तानी टीमले इङ्ल्यान्डलाई कडा टक्कर दियो । तर उसले जित्न भने सकेन ।
त्यसपछि इङ्ल्यान्डले श्रीलंकालाई हरायो । सन रोयको ४४ बलमा नटआउट ७८ रनको मद्दतमा न्यूजील्यान्डको १५३ रनको लक्ष्य भेट्टाउँदै इङ्ल्यान्ड फाइनलमा आयो ।
अर्कोतर्फ वेस्टइन्डिजको टीमले श्रीलंकालाई सात विकेट र दक्षिण अफ्रिकालाई तीन विकेटले हरायो । तर समूह चरणको अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानको हातबाट पराजित भयो । अफगानिस्तानसँग हारेको वेस्टइन्डिज ३० मार्चमा मुम्बईको वानखेडे स्टेडियममा भारतसँग भएको सेमिफाइनल भिडन्तमा जित निकाल्दै फाइनलमा आयो ।
ईडन गार्डेन स्टेडियमको अवस्थादेखि वेस्टइन्डिजको स्पिन बलिङबाट सबै परिचित छन् । वेस्टइन्डिजले भारतविरुद्ध प्रयोग गरेको यही स्पिन बलिङलाई हतियार बनाउने भएको छ । अर्कातिर क्रिस गेल, लेन्डल सिमन्स जस्ता ब्याट्म्यानले विपक्षीको सातो उडाइरहेका छन् । यी दुई खेलाडी ब्याटिङमा जमे भने उपाधि जित्ने पक्का छ ।
तर इङ्ल्यान्डसँग पनि जेसन रोय, एलेक्स हेल्स, जो रूट र जोस बट्लर जस्ता खेलाडी छन् । जसले जुनसुकै खेलमा पनि नतिजामा उलटफेर गर्न सक्छन् ।
आइतबार साँझ हुने फाइनल भिडन्तअघि रूटले भने, ‘हामी आफ्नो इच्छानुसार नै सकारात्मक खेल जारी राख्नछौं । आइतबार पनि यही हुनेछ । हामी वेस्टइन्डिजको खेलसँग परिचित छौं । उनीहरुलाई हराउन हामी उत्कृष्ट खेल्नेछौं ।’
इङ्ल्यान्डसँग पनि युवा र उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान छन् । तर टीमले ईडन गार्डेन स्टेडियममा नै सन् १९८७ को ५० ओभरको विश्वकपमा अस्ट्रेलियाविरुद्ध हारको सामना गर्नुपरेको थियो ।
दुबै टीमले आफ्नो कमीलाई मेट्दै टी-२० विश्वकपको उपाधि जित्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । यी दुई टीममध्ये आज कसले बाजी मार्ला? त्यसकै लागि क्रिकेट प्रेमी अधीर भएर प्रतिक्षारत छन् ।
प्रकाशित मितिः २१ चैत्र २०७२, आईतवार १३:०५